नेपाल लिटेरेचर फेस्टिभल यसपाली सराङकोटमा सेमी भर्चुअल लाईभ - Jukson.com
Headline Title onlyन्युज पोखरापोखरामनोरन्जनसमाजसाहित्य जक्सनहाम्रो देश
नेपाल लिटेरेचर फेस्टिभल यसपाली सराङकोटमा सेमी भर्चुअल लाईभ
Jukson४ पुष २०७७, शनिबार १८:२२ मा प्रकाशित
नेपाल लिटेरेचर फेस्टिभल यसपाली माछापुच्छ्रे हिमालको ‘नेचुरल ब्याक्ड्रप’ पारेर सराङकोटमा सेमी भर्चुअल लाईभ हुने भएको छ । दर्शक दिर्घामा भने यसपाली खुला रुपमा दर्शक उपस्थित हुन पाउँनेछैनन। आयोजक संस्था बुकवर्म फाउण्डेसनका सदस्य र अतिथीहरु मात्र लाईभ उपस्थित भएर यसपाली ‘नेपाल लिटेरेचर फेस्टिभल-२०२’ शुरु हुनेछ । दर्शकले भर्चुअल्ली फेस्टिभलको आनन्द लिन पाउनेछन।
कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाल साहित्य महोत्सबको स्वरुप बदलेर ‘भर्चुअल’ रुपमा आयोजना गर्न लागेको महोत्सबका निर्देशक अजित बरालले बताए । ‘महोत्सबको नवौं संस्करण आयोजना गर्ने कि नगर्ने भनेर हामी अन्यौलमा थियौं’, बरालले भने, ‘भर्चुअल रुपमै भए पनि महोत्सबलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि महोत्सब आयोजन गर्न आमी जुटेका छौं ।’
फेवातालको आँगनमा हुँदै आएको महोत्सब यसपाली भर्चुअल रुपमा सम्पन्न गर्न सराङकोट उक्लेको छ । जहाँबाट उत्तरतर्फ फर्कँदा अन्न्पूर्ण हिमश्रृङ्खला र दक्षिणतर्फ फर्कँदा फेवाताल र पोखरा शहर देखिन्छ ।
‘माछापुच्छ्रेलाई साक्षी राखेर हाम्रा सत्रहरु विश्वभर पु¥याउने प्रयास गरेका छौं’, महोत्सबका कार्यकारी निर्देशक निरज भारीले शनिबार पोखराका पत्रकारहरुसँग भने ‘भौतिक रुपमै महोत्सब आयोजना गर्ने धोको थियो, कोरोना महामारीले दिएन ।’
महोत्सबको सत्रहरु र समय पनि यसपाली छोट्टिएको छ । विगतका बर्षहरुमा ३ दिनसम्म हुने महोत्सबमो झण्डै एक सय जनासम्म अतिथी वक्ताहरु रहने थिए । यसपाली पुष १४ र १५ गते दुई दिन मात्र महोत्सब संचालन हुनेछ । यसपालीको महोत्सबमा ४० जना अतिथी वक्ताहरु रहेन कार्यकारी निर्देशक भारीले बताए । उनका अनुसार महोत्सबका सत्रहरु युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रशारण हुनेछन् ।
सन् २०११ मा काठमाडौंको झम्सिखेलस्थित ज्ञान मण्डलाको प्राङ्गणबाट शुरु भएको महोत्सब पोखरा आएर बृहत् विस्तार भएको थियो । नवौं संस्करणसम्म आइपुग्दा महोत्सबले उचाइ उचाई लिएको भन्दै निर्देशक बरालले महोत्सबले कला साहित्यको मात्र प्रवर्धन नभई विचार निर्माण र समाजको आलोचनात्मक चेतलाई समेत उचाई दिएको बताए ।
‘यस प्रकारका सामाजिक बहस र विमर्शले सर्जक र पदासिन व्यक्तित्वलाई जवाफदेही बनाउन विचार मन्थन गरी समाजलाई मार्गदर्शन गर्छ’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रलाई शक्तिशाली बनाउन पनि यसले मदत पु¥याउँछ ।’
महोत्सबको पूर्व सन्ध्यामा पुष १३ गते शुभारम्भ साँझ हुने आयोजकले बताएका छन् । उक्त साँझमा पत्रकार अमृत सुवेदीले गजलकार प्रदीप रोदनसँग मेहफिल कार्यक्रम हुने आयोजकले बताएका छन् ।
महोत्सबको विद्धत प्रवचन अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले ‘साहित्यको अर्थ’ शीर्षकमा प्रवचन दिनेछन् । यस्तै ‘कोरोनाकालीन उद्योग वाणिज्य’ शीर्षकमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग कुवेर चालिसेले संवाद गर्नेछन् ।
यस्तै, ‘युवाको नजरमा नेपाल’ शीर्षकमा प्रकृति भट्टराई बस्नेत, डा. भावना तामाङ, सौगात वाग्लेसँग जगन्नाथ लामिछानेले संवाद गर्नेछन् । महोत्सबमा ‘पढ्ने हुटहुटी’ शीर्षकमा हरि खनाल, मनुश्री महत र बिकेश कविनसँग स्वेच्छा राउतले छलफल गर्नेछिन् भने ‘कोरोनाले गलाएको जनस्वास्थ्य’ विषयमा डा. अनुप सुवेदी र डा. रोलिना धितालसँग सोबिता गौतमले सहजीकरण गर्ने तालिका रहेको छ ।
महोत्सबको सातौं सत्रमा ‘के सम्पदा के बसोबास’ विषयमा रवीन्द्र पुरी र मिलन बगालेसँग आलोक तुलाधरले छलफल चलाउनेछन् । यस्तै, ‘कर्मठ केटी’ शीर्षकमा बोनिता शर्मा, आयुषी केसी र सोनिका मानन्धरसँग आभास्ना पाण्डेले संवाद गर्नेछिन् ।
महोत्सबको नवौं सत्रमा ‘क्वेयर हुनुको अर्थ’ शीर्षकमा निरञ्जन कुँवर र भिक्कु कश्यपले संवाद गर्नेछन् भने ‘अद्भुत व्यक्तित्व, असाधारण लेखन’ विषयमा मनुजबाबु मिश्रमाथि रोशन मिश्रले र मदनमणि दीक्षितमाथि इल्या भट्टराईले बोल्नेछिन् ।
महोत्सबमा तीन आख्यानकार केशव दाहाल, दुर्गा कार्की र बिना थिङसँग ‘तीन आख्यान’ शीर्षकमा शिवानीसिँह थारुले संवाद गर्नेछिन् । यस्तै, ‘कोरोनापछिको सिनेमा’ शीर्षकमा निश्चल बस्नेत, भाष्कर ढुङ्गाना र प्रियङ्का कार्कीसँग पत्रकार यज्ञशले संवाद गर्नेछन् ।
महोत्सबको १३ औं सत्रमा ‘संघीयताका अवसरहरु’ शीर्षकमा पोखरा महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ र सीता सुन्दाससँग पत्रकार दीपक परियारले संवाद गर्नेछन् । यस्तै, ‘महारानीको राजनीति’ विषयमा यस पटकको मदन पुरस्कार विजेता आख्यानकार चन्द्रप्रकाश बानियाँसँग राजकुमार बानियाँले संवाद गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
महात्सबको १५ औं संस्करणमा ‘जलबायु परिवर्तन र हाम्रो भविष्य’ विषयमा सिलसिला आचार्य र डा. अरनिको पाण्डेसँग पत्रकार रमेश भुषालले छलफल चलाउनेछन् । महोत्सबको अन्तिम सत्रमा ‘प्रदेशबाट देखिने देश’ विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग पत्रकार बसन्त बस्नेतले संवाद गर्नेछन् ।
यसपालीको महोत्सब विगतका भन्दा नितान्त फरक रहेको महोत्सबका निर्देशक बरालले बताए । ‘यसपाली वक्ताहरु र विषय नयाँ छन’, बरालले भने, ‘कतिपय वक्ता त सार्वजनिक रुपमा नचिनिएका पनि छन् ।’
‘जहाँ शब्दहरु जीवन्त हुनेछन्’ नारा सहित शुरु भएको महोत्सब संचालनमा गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरले सहयोग गरेको आयोजकले जनाएको छ ।
कुन-कुन सत्रमा को-को आउदैछन फेस्टिभलमा ?
कार्यक्रमका तस्बिरहरु :
पोखरामा खुल्यो क्रिस्टल वयेर्स